Mareykanka oo sheegy inay dib u bilaabayaan shaacinta natiijada duqeymaha ay ka fuliyaan Soomaaliya. - Latest News Updates
Mareykanka oo sheegy inay dib u bilaabayaan shaacinta natiijada duqeymaha ay ka fuliyaan Soomaaliya.
Muqdisho:- Warnka soo baxay Taliska Mareykanka ee Qaaradda Africa e Africom ayaa lagu sheegay inuu dib u bilaabayo shaacinta khasaaraha Duqaymaha uu la beegsado Dagaalamayaasha Qaaradda ku nool, kadib markii uu talisku soo saaray War uu ku sheegay in uu si kooban u joojinayo shaacinta khasaaraha.
“In aan shaacino Natiijadda Duqaymaha ayaan sii wadi doonaa, inkastoo aan ka shaqayneyno in aanan xoogaga saarin Tiradda Maleeshiyaadka la dilay iyo sida duqaymahu uga cawinayaan saaxiibadeen Soomaaliya in ay gaaraan istiraatiijiyadda Amni” ayuu sheegay Afayeenka AFRICOM John Manley oo la hadlay VOA-da.
Military-ga Mareeykanka yaa Khamiistii waxaa uu ku dhawaaqay in labo Duqaymood ay la beegadeen Al-shabaab, mana uusan sheegin khasaaraha ka dhashay iyo meesha ay duqayntu ka dhacday.
Afayeenka AFRICOM-na waxaa uu sheegay in Dowladda Soomaaliya ay Warbixintaas heli doonto.Hase ahaate goor dambe Sarkaal katirsan waaxda Difaaca Mareeykanka ayaa waxaa uu VOA u sheegay in duqaynta lala beegsaday Bar kontrool oo ay Al-shabaab leeyihiin isla markaana uu ku dhintay hal dagaalame.
Dhanka kale Taliska Mareeykanka ee Qaaradda Africa waxaa looga bartay in uu bixiyo macluumaadka dhuqaynta uu Soomaaliya ka fuliyo ee ah Tiradda Duqaynta, xilliga ay dhacday, Halka ay ka dhacday, Tiraddda Khasaaraha Nafeed iyo hantiyeed.